Musi wekuzvarwa kwezuva Miley Cyrus akataura pamusoro pezvipo zvakanaka kubva kuLiam Hemsworth, achipikisa makuhwa ekuzvitakura kwake
Unofungidzirwa uye unonyadzisa nyota pop Miley Cyrus anopemberera zuva rake rekuberekwa kwema25 musi waNovember 23rd. Muzororo wemuimbi wacho ari kunyatsosvetuka, asi hauna kutanga nhasi, asi mangwanani ezvimwe zvishamiso zvisingakanganwiki kuti mukomana wake akanga agadzirira Liam Hemsworth ane makore 27. Yakanga isiri pasina kufungidzira ...
Kupembera kwemafesheni uye kuonekwa kunorwadza
Liam Hemsworth, uyo Miley Cyrus akabatanazve gore rapera, akasarudza kuvaka mhemberero dzemhuri mumba mavo, akaturikidza akapoteredza imba yakawanda sirivha mipira iyo inoumba zita rekuzvarwa kasikana.
Liam Hemsworth naMiley Cyrus
Liam Hemsworth vakazvikudza kuMiley Cyrus mabhora
Koreshi akazviisa panzvimbo yekutambirwa kwevanhu panzvimbo yezvokukomba. Muchikamu, anowedzera muT-shati yakareba yakareba, iyo, inofamba pamusoro pemufananidzo wayo, inoratidzira dumbu rinoputika.
Vafudzi vomuimbi vakazotanga kusava nechokwadi chokuti akakurira semugumisiro wekudya kwemanheru uye akatanga kumubvunza muimbi pamusoro pekuita pamuviri, asi haana kuwana mhinduro zvakare.
Zvisinei, ngatidzokerei kuna Liam chipo kuna Miley, uyo waive atozvirumbidza pamusoro pa Instagram. Mutambi wacho akasarudza kushamisika shamwari yake nechishongo chisina kujairika, achimupa nemhete yegoridhe nemashoko akanyorwa "LiLi" kubva kumatombo anokosha akawanda. Ndizvo zvinotaurwa naHemsworth.
Necklace ine chikwangwani "LiLi"
Achiedza kutaura manzwiro ake, Miley akanyora kuti:
"Murume wangu atokunda, mberi kwezvose. Uye iyi haisi zuva rangu rokuberekwa! Iyo mhete haina kukwana yakanaka! "
Liam Hemsworth akapa Miley Cyrus mushepa
22 mifananidzo yevana, mausingazombozive nyeredzi pasina ruzivo rwedu!
19 nyeredzi dzakarasikirwa nekusava nemhosva pamwe neshamwari
Miley Cyrus Kurota kwekuroora Liam Hemsworth paburika
Vashandi vacho vakaona kuti mutsara wakagadzirwa nenzira imwe chete seyenderedzwa iyo Liam Miley yaakamupa kwaari musi wekuberekwa kwekuberekwa kwemakore makumi mana nemana gore rapfuura.
The Miley Ring, yakapiwa naLiam Hemsworth
Miley Cyrus gore rakapera cake muhupenyu hwembwa
Justin Timberlake akabata mudzimai wake Jessica Biel naamai vaMusi
Madonna akauya kune insole sewadhakwa pamufananidzo wemifananidzo
Harry Styles uye Taylor Swift
Mickey Rourke anovhara wig
Celine Dion anotengesa imba yake muFlorida kwehafu yenhanho
Janet Jackson nemwanakomana wake vari kupemberera Krisimasi muLondon, pasinei nekupikisa kwababa vomwana
Kim Kardashian akaberekera mwana wechipiri
Chloe Kardashian ane pamuviri akatanga kushanda kwenguva pfupi mushure menyaya dzekutambudza kwaTristan Thompson
Liv Tyler akabudisa mufananidzo nemwanasikana asati aberekwa
Bella Hadid naKendall Jenner muLondon vakabatanidzwa muPadde Parade
Gerard Depardieu akaparadzanisa neimba yake muRussia
Gavin Rossdale ane hukama neGermany model uyo ari muduku kudarika iye kwemakore 24
Vadiwa Cristiano Ronaldo vakatsigira mutambi wechikwata chokupedzisira muUnited States
Upenyu hwehupenyu hwaLucas Haas
How to cook a hodgepodge in multivark?
Bite ye midges
Kuwedzera kwekushisa panguva yekuzvitakura mumavambo ekutanga
Ndinokwanisa kupinda mumitambo musi weChishanu chakanaka here?
Mhuka dzakauya kuzokutaurirai, uye ndicho chinhu chakanaka chamuchaona nhasi!
Ndeapi kupfeka kacheche muchezheni kufamba?
Nzira yekudyisa chiGerman Shepherd puppy?
Nzira yekubika goulash - zvakavanzika uye zvakanakisisa mapepipe nokuda kwechingwa chinonaka cheHungarian
Melanoma - Zviratidzo
Mumwe musikana wemamita 1 ekukwirira akashora bhizinesi yekufananidzira uye akakunda!
Ungadyara sei gorosi nembeu kubva pamiseve?
40 mifananidzo, iyo inoratidza kuti shish kebab haina kodzero yekuve inofadza
Chechi yeSan Francisco
Inobata nama tomate uye cheese